Vatobe nihotsaka teny Ampamarinana: efatra namoy ny ainy, 11 naratra, misy ireo tena voa mafy | NewsMada
Vatobe nihotsaka teny Ampamarinana: efatra namoy ny ainy, 11 naratra, misy ireo tena voa mafy
Nisy fihotsahan’ny tany sy ny vatobe indray, omaly maraina teny Ambanin’Ampamarinana. Olona efatra, araka ny tatitra avy amin’ny zandarimariam-pirenena, omaly tolakandro, ny fantatra fa namoy ny ainy. 11 ireo naratra ka misy voalaza fa miady amin’ny fahafatesana eny amin’ny hopitaly amin’ireo.
Roa herinandro aty aoriana! Nisehoana loza indray teny Ambanin’Ampamarinana, omaly tokony ho tamin’ny 10 ora sy 17 minitra. Niparasaka nizara dimy ny vatobe iray ary niparitaka ka nifatratra tamin’ny trano miisa fito teny an-toerana. Araka ny nambaran’ny prefen’ny polisy, miisa efatra ny olona maty, ary 11 ireo naratra. 15 ny isan’ny olona nentina teny amin’ny hopitaly ka maty teny an-toerana ireo olona efatra ireo. Voalaza aza fa mbola misy atahorana ireo olona efatra hafa efa any amin’ny hopitaly HJRA ireo.
Tao anatin’ny indray mipi-maso, tsy nisy nanampo ny zava-nitranga teny amin’ny fokontany Ambanin’Ampamarinana omaly maraina io. Tsy nisy orana fa andro ningaingaina no nihotsaka tampoka ilay vatobe avy eny ambony. Ity toerana ity izay tokony ho 200 metatra miala ilay nisehoana loza namoizana ain’olona maro, roa hendrinandro lasa izay.
Tonga teny an-toerana nanao ny asa famonjena ny mpamonjy voina, ny zandary sy ny polisy ary ny avy amin’ny BNGRC. Nifamonjy ihany koa ny olona izay tao anatin’ny hiakiaka sy ny ranomaso. Nihazakazaka ny sasany nizaha sao misy havana taraiky, sns. Ny hafa, niezaka namoaka entana ary ny hafa izay tsy tra-doza, nikoropaka nivoaka sy namoaka entana avokoa.
Nalana teny an-toerana avy hatrany koa ny olona teo amin’ny 13 tafo teo. Voalaza fa napetraka eny amin’ilay efa nametrahana ireo traboina eny Mahamasina ireo.
Tonga voaloha ny zandary
Nilaza ny avy amin’ny zandary fa tonga voalohany teny an-toerana. Ny andiana zandary maro namaly ny antso raha vao nahare ny loza. Teny am-panaovana fisafoana manerana ny tanàna izy ireo no voaantso ka tonga teny mbola niaraka tamin’ny basiny. Ankoatra ny asa fifanampiana nanao fanavotana niarahany tamin’ireo mponina, efa nanao izany teo mandra-patongan’ ireo mpamonjy voina, nanao ny asa fiarovana ny fananan’ ireo olona ireo ny zandary. Tsy maintsy narovana ihany koa ireo mponina teny noho ny hamaroan’ny olona tonga teny ka mety hisian’ny fanararotana. “Niezaka nanao izay hampalalaka ny lalana mba afahana mpamonjy ireo naratra haingana ihany koa izy ireo sy mba hanatanterahan’ ireo mpamonjy voina ny asa ny izay voaelingelin’ ny hamaroan’ny olona”, hoy ny fanazavana. “Tsiahivina fa isan’ ny andraikitra ao anatin’ny asa famonjena avokoa izany, ny fifamenoan’ny asan’ ny mpamonjy voina sy ny zandary, ny fiarovana sy ny fandaminana”, hoy ny fanamafisana.